पथरी प्रिमियर लिगः देवीगंजसँग वाई.जि.एफ.टी. निराश – Khel Dainik
रेफ्री विवादः लिग नखेलाउने भन्दै रेफ्रीहरुको सामूहिक राजिनामा • दोस्रो खेलमा पनि किरनको नयाँ टोली माजियाको फराकिलो जित • झापालाई हराउँदै फिदिम सेमिफाइनलमा • लिगमा सोमबार भएका दुई खेलहरु बराबरीमा सकिए • बीबीएफसी, झापा सेमिफाइनलमा •
पथरी प्रिमियर लिगः देवीगंजसँग वाई.जि.एफ.टी. निराश
पुष ५, २०७७ | (PostaComment)
पथरी (खेलदैनिक) । मोरङको पथरीमा जारी टेन्सबर्ग पथरी शनिश्चरे फुटबल प्रिमियर लिगको समूह बी तर्फ आइतबार सम्पन्न खेलमा देवीगंज फुटबल क्लबले पहिलो जित दर्ता गरेको छ ।
पथरी रंगशालामा भएको समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा देवीगंजले वाई.जि.एफ.टी. लाई ३–२ ले हरायो । पथरी रंगशालामा भएको खेलको तेसे मिनट मै अभय लिम्बुको गोलबाट वाई.जि.एफ.टी.ले खेलमा अग्रता बनाएको थियो । तर वाई.जि.एफ.टी. ले त्यो अग्रता जोगाउन सकेन ।
गोविन्द गुरुङले देवीगंजका लागि २५औं मिनटमा बराबरी गोल गर्दै खेललाई १–१ को स्थितिमा पुर्याए । यद्यपि ४५औं मिनटमा रोशन न्यौपानेको गोलबाट वाई.जि.एफ.टी. ले खेलमा फेरि दोस्रोपटक अग्रता बनायो । तर त्यो दुईपटकको अग्रता पनि जोगाउन सकेन ।
उता देवीगंजका लागि सन्तोष न्यौपाने निर्णायक बने । न्यौपानेले खेलको ६९ र ८०औं मिनटमा लगातार दुई गोल गर्दै टोलीको रोमाञ्चक जित सुनिश्चित गरे । खेलको म्यान अफ द म्याच देवीगंज कै निर्णायक गोलकर्ता सन्तोष न्यौपाने घोषित भए । उनलाई केन्द्रिय प्रशिक्षक संघका उपाध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले पुरस्कृत गरे ।
समूह बी बाट सेमिफाइनल पुग्ने टोलीको टुंगो लाग्यो
आइतबारको खेलमा वाई.जि.एफ.टी. को हारसँगै समूह बी बाट सेमिफाइनल पुग्ने टोलीको टुंगो लागेको छ । समूह बी बाट टेन नवोदय एफसी र द रियल ब्रदर्श एफसी सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । यी दुई टोलीको २ खेलमा क्रमशः ६ र ४ अंक छ ।
यसअघि २ खेलबाट १ अंक जोडेको वाई.जि.एफ.टी. को सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना थियो । तर आइतबारको पराजयसँग वाई.जि.एफ.टी. को त्यो सम्भावना पनि समाप्त भएको छ ।
आइतबारको नतिजापछि देवीगंज ३ खेलबाट ३ अंकका साथ तेस्रो स्थानमा उक्लिएर लिगको समापन गरेको छ भने १ अंकका साथ वाई.जि.एफ.टी. पुछारमा झरेको छ ।
लिग अन्तरगत सोमबारको अन्तिम खेल टेन नवोदय एफसी र द रियल ब्रदर्श एफसीबीच हुनेछ । यो खेल दुवै टोलीका लागि औपचारिक खेलका रुपमा हुनेछ । किनभने समूह बी बाट यी दुई टोली नै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरिसकेका छन् । र सोमबारको खेलको नतिजाले समूह बी को विजेता र उपविजेताको छिनोफानो गर्नेछ ।
स्थानीय स्तर मै पहिलोपटक अक्सनमार्फत खेलाडी खरिद गरि आयोजना भईरहेको लिगको विजेताले उपाधिसहित नगद १ लाख ७५ हजार हात पार्नेछ भने उपविजेताले ७५ हजार प्राप्त गर्नेछ । लिगको फाइनल खेल भने आउँदो पौष ११ गतेका दिन हुनेछ ।
← बिमल एक बर्ष मैदान बाहिर रहने निश्चित झरना स्पोर्टसलाई उपाधि →
बिबिएफसी फाइनलमा, उपाधिका लागि माङ्सेबुङसँग भिड्ने पुष ५, २०७७
एन्फा र रेफ्रीबीच सहमति, रेफ्रीहरुको राजिनामा पनि फिर्ता पुष ५, २०७७
वार्ड नम्बर २० र १६ अन्तिम चारमा प्रवेश पुष ५, २०७७
रेफ्री विवादः लिग नखेलाउने भन्दै रेफ्रीहरुको सामूहिक राजिनामा पुष ५, २०७७
रुपन्देहीमा फुटसलको ‘प्लेटफर्म’ बन्दै युनिक पुष ५, २०७७
मंसिर २१ देखि प्रथम सतिसाले वैटर कप पुष ५, २०७७
Copyright © 2021 Khel Dainik. All Rights Reserved.